Finfinnee fi Abbaa Biyyummaa Oromoo | QEERROO
Finfinnee fi Abbaa Biyyummaa Oromoo
Mootummaan TPLF yaroo itti tolu ergamtuu ishee OPDO Finfinnee keessaa ari’uu yaroo mormiin itti xinnoo jabaatu gara Finfinnee fiduu yaroo caalaa itti hammaatu immoo Uummatni Oromoo Finfinnee irraa dhimma qabu jettee olii fi gadi oofuu dha. OPDOn meeshaa dantaa TPLF eeguuf kan ijaaramte malee uummata Oromoof faayidaa tokko baasuuf akka hin ijaaramne xinnaa fi guddaan Oromoo bareechee hubachuu qaba. Gaaffiin uummatni Oromoo Fifninnee irraa qabu gaaffii tokkicha qofa. Gaaffi Abbaa biyyummaa mirkaneefachuu. Gaaffiin kun immoo gaaffii abbaa biyyummaa Oromiyaa adda bahee ilaalamuu hin danda’u.
OPDOs taate namoonni biraa warri gaaffii Finfinnee kana mirmirsaa jiran beekaa qabsoo uummtni Oromoo oofaa jiru irratti danqaraa uumuuf akka tahee adda baafnee hubanna. Finfinnee magaalota Oromiyaa kan akka Matuu, Naqamtee, Jimaa ,Asalaa, Gobaa , Harar fi warra kana fakkaatan irraa maalitu adda godha? Yoo Finfinneen hundhurri Oromiyaa bilisa hin baane magaalli Oromiyaa kam iyyuu bilisa bahuu hin danda’u. Finfinneen akkuma handhuraa Oromiyaa taate kiyyoo garbummaa Uummata Oromofis handhura akka taateejirtu dagatamuu hin qabu.
Kaleessa Mootummaan Miniliki gaafa Oromoo cabsee teessuma Mootummaa isaa Finfinnee godhatuu lafa qulaa gamoojii argatee miti. Hammeenya hiriyyaan hin qabneen ilmaan Oromoo irra qubatanii jiran waraanan irraa dugugee balleessuudhaan nafxanyootaaf qoodamte. Guyyaa gaafasii kaase amma har’a dhiignii fi imimaan Oromoo Finfinnee irratti dhangala’aa jiru qorree hin beeku. Har’a Habashoonni qabeenya isaanii godhatanii kan irratti bashananaa jiran jala lafee akkaakayuu fi abaabayuu keenyaatu jira. Abbaa galuuf haa galuu Uummatni Oromoo waan tokko adda baasee himatee jira. ” Lafni keenya lafee keenya” jedhee ifatti labsatee jira..
Kana booda Uummatni Oromoo lafa isaa irraa taakkuu tokko dabrsee garboofatu Habashaa miti orma biraa kamiifuu kenna jedhee hin yaaduu. Uummatni koo, Uummatni Oromoo, har’a eenyummaa isaa fi humna isaa yaroo dammaqee hubate kanatti yaada ototoraa Uummatni Oromoo Finfinnee irra dhimmi qabu jettee ergamtuun TPLF Uummata Oromoo bira deemtee afarsaa jirtu baayyee kan nama qaanesu dha. Warra OPDO kanaaf gam tokkoon baayyeen gaddaaf. Gooftaa diduu hin dandeenye jala bulaa jiru. Gara uummata isaanii akka hin baqanne jaalala garaa isaanii caalaa ofii fi uummata isaanii irratti amantii gahaa hin qaban. Akkuma qaaman boji’amaa tahan samuu fi onneen isaanii illee boji’amee waan jiruuf abdiin tokko isaanitti hin mul’atu. Yoom iyyuu TPLF ham gootee waan isaan liqimstu waan itti fakkaatuuf gaaffii tokko malee ergaa ishee hojii irra olshuuf wixxifatu. Amma dhumaa TPLF itti gabaranii wajjin baduu malee waa’een jalaa bilisa bahuus itti hin mul’atu.
Akka oduu Sagleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Guraandhala 2, 2018 jedhutti OPDOn magalaa Danbi Doollo keessatti Afaan Amaaraan kan qopha’e dhimmi uummatni Oromoo Finfinnee irraa qabu jedhu uummataaf dhiyeessuu yaaluu dagenye. Mee Afaan Amaaraan uummata Oromoof dhiyaachuu kana irraa maal agarra?
Yoo Afaan Oromoon hiikamee yaada jenne gara malee hikatanii jirtu jette TPLF akka rakkoo isaanitti hin fidne yaadahuu irraa tahuun ni mala.
Waan akka atatamaan hojjetamuu qaba jettee TPLF itti keniite kana hiikuuf yaroo gahaa dhabuun ni mala.
Yoo Afaan Amaaraan tahe namoonni uummatni Oromoo akka mirga isaa hin argane jibinsa qaban akka hubatanii uummata Oromoo dura dhaabbatanii onkora uumuuf ni gargaaraa yaaduun tahuun ni mala.
Ykn TPLF tuffii uummata Oromoof qabduu agarsiisuu fi har’as nan jira jettee oftulluummaa ishee mul’isuufiis tahuun ni mala.
Warra ergaa TPLF kana baatee Uummata Oromoo bira deemu kun xiyaaraa nama malee balaliitu (drone) irraa adda baafnee ilaaluun nama rakkisa. Waan itti kenname kana baatanii bakka itti ergaman geessuu malee , maaliifan geessuu qaba kan jedhuuf ? deebii hin qaban. Warra kana taa’anii oduu isaanii dhaga’uu irraa shimalaan gobanii ari’uu wayya. Kan diinnii ergaa salphinaa uummata keenya itti ergu caalaa kan ergaa kana uummata keenyaaf fidu warra maqaaf Oromoodha ofiin jedhan yaroo tahan salphinni keenya dacha taha.
Kaleessa Minilki har’a TPLF uummata Oromoo lafa isaa irraa duguganii waan namoota isaanii irra qubsifatanii fi waan qabeenya uummata Keenyaa dhufatanii maaloo xiqqoo irraa nuuf qiccaa jenna? Hammeenya himamee hin dhumne aadaa, Afaan, Seenaa fi qabeenya uummata keenyaa irratti raawwatameef galatooma baga fudhatan jennu? Dhuunfaa hundhura lafa keenya kan taaate Finfinnee irratti uummatni Oromoo eenyu wajjin iyyuu maree hin seenu. Gaafa Oromiyaan bilisoomtu kan hundaa dura bilisoomuu qabu hundhura Oromiyaa kan taate Finfinnee dha. Humni Oromoo kam iyyuu utuu Finfinne hin bilisoomsinee Oromomiyaa bilisoomse jedhee dhaadachuu hin danda’u.
Finfinneen maqaa uummata isheen ykn kan Minilki mogaaseen haa waamamtu har’a magaala guddoo impayeera Itopiyaa keessaa namni baayyeen keessaa jiraatu. Finfinneen gaafa bilisoomtus akkuma kana namni baayyeen keessa jirata. Namni Oromoo hin taane heeraa fi Seeraa Oromoo fudhatee kabajaan uummataOromoo wajjin jiraachuu fedhu hunduu keessa jiraachuu danda’a. Warri heeraa fi seeraa Oromoo hin fudhatnee fi abbaa biyyuummaa Oromoo(Oromo Citizenship) hin qabne gara biyya isaanii darbamu. Abbaa biyyuummaa qabatanii warri heeraa fi seera cabsuu immoo seeran gara mana hidhaa deemu.
Maalumatu egaa Finfinnee akka magaalota Oromoo kaan keessa tokko hin taane ishee dowwaa? Waan ifa jiru amma Oromiyaan harka koloneefata jirtu fakkeessuu fi ittiin uummata burjaajessanii qabsoo bilisummaa uummatni keenyaa oofaa jiru dadhabsiisuu malee afaniin odeessuun rakkina tokko illee hin hiiku. TPLF garuu yaroo bitaa ishee achi dheerefachuu jecha shira hin xanne hin qabdu. Qeerroo fi uummatni Oromoo shira TPLF kana hubatanii harka fashalsiisuudhaan Xummura Qabsoo Bilisummaa jabeessu qaba.
1 thought on “Finfinnee fi Abbaa Biyyummaa Oromoo”
president on February 10, 2018 at 8:29 am said:
yada finfineratii katabtanii, dhugafii kanaf qabsaura jiraa.
partii tokkumma oromo